आज कांग्रेस र एमालेको घमासान भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ? - गोकर्णेश्वर खबर
आज कांग्रेस र एमालेको घमासान भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
गोकर्णेश्वर खबर१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०७:२६ मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) १६९ पाठक संख्या
काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच आज सोमबार लुम्बिनी प्रदेशमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा चुनावी भिडन्त हुँदैछ ।
लुम्बिनीबाट रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा आज चुनाव हुने र सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा आज सोमबार बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले ३ वटा मतदान केन्द्र बनाइएका जानकारी दिए ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मतदान केन्द्रमध्ये ‘ग’ कोरोना संक्रमित रहेका जनप्रतिनिधिका लागि मतदान गर्ने केन्द्र रहेको छ । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् ।
आज सोमबारै मतपरिणाम आउने सम्भावना रहेको छ । मतदान सकिए लगत्तै मतगणनाको व्यवस्थापन मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि पद रिक्त भएको थियो । नेकपा एमालेले खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । खड्कालाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दृगनाराय पाण्डे उम्मेदवार रहेका छन् । पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन गरेको छ । पाण्डे हालै नेकपा एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
लुम्बिनीमा ८३ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले आईतवार अपराह्न जसपाका ४ जना सांसदलाई पुरक मतदानको अधिकार समेत दिएको छ ।
उपनिर्वाचनमा १ जना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ । ८३ जनाको कूल मतभार ३ हजार ९८४ रहेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख गरी २१७ मतदाता रहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कूल मतभार ३ हजार ९०६ रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह जोडेर कूल मतभार ७ हजार ८९० रहेको छ ।